Madaxweynaha oo kulan degdeg ah xiisadaha ka taagan Gaalkacyo kala yeeshay wakiillada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya
You are at:Home»CIYAARO»Madaxweynaha oo kulan degdeg ah xiisadaha ka taagan Gaalkacyo kala yeeshay wakiillada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya
By somnews on	 December 3, 2015 CIYAARO, ENGLISH NEWS, MAQAALLO, WARARKA, World News
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa Xarunta Madaxtooyada kulan degdeg ah kula yeeshay wakiillada beesha caalamka u jooga Soomaaliya, isagoo kala hadlayey dagaalka ka taagan magaalada Gaalkacyo.
Madaxweynaha ayaa danjireyaashaasi uga waramey xaaladda ka taagan Gaalkacyo, isagoo sheegay inuu dhowr jeer maanta khadka telefonka kula hadley Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Sharma’arke, madaxweyneyaasha maamullada Puntland iyo Galmudug, Cabdiweli Maxamed Gaas iyo Cabdikariim Xuseen Guuleed, dhammaantoodna ay u caddeeyeen inay rajo ka qabaan in degdeg dagaalka loo joojiyo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in xiisadaha ka taagan Gaalkacyo ay dowladda dadaal weyn u gashey sidii loo xalin lahaa, taasi darteedna, isaga iyo Ra’iisul Wasaarahana ay uga baaqsadeen shirar caalami ah oo dalka dibeddiisa ay uga qeybgeli lahaayeen.
“Kama daaleyno inaan xal nabadeed u raadino dagaalka Gaalkacyo, hase yeeshee waxaan madaxda maamullada kala duwan ee dalka iyo shacabkaba u jeedinayaa in isla xisaabtan uu jiri doono, mar dambena aysan dhici doonin in shacabka la waxyeeleeyo iyadoon cidna loo raacan. Beesha caalamkana waxaan ka codsaneynaa inay gacan nagu siiso dadaallada aan wadno ee ku aaddan nabadda iyo inuu sharciga si buuxda u shaqeeyo’’, ayuu Madaxweynaha u sheegay wakiilladaasi ka socday beesha caalamka.
Mr Raisedon Zenenga, oo ah Ku Xigeenka Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya , oo horkacayey wakiilladaasi beesha caalamka, ayaa soo dhoweeyay dadaalka madaxda Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ee ku aaddan xal u helista dhibaatada ka jirta Gaalkacyo.
Mr Zenenga ayaa sheegay in beesha caalamka ay dowladda Soomaaliya ka taageeri doonto tallaabo kasta oo lagu xaqiijinayo joojinta dhiigga ku qubanaya Gaalkacyo, iyo in lala xisaaabtamo kuwa colaaddaasi hurinaya.
Wafdiga beesha caalamka ayaa ugu baaqey madaxda iyo maamullada Galmudug iyo Puntland inay degdeg ugu hoggaansamaan heshiiskii nabadeed ee shaley lagu kala saxiixdey Gaalkacyo.
Kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa Guddoomiyaha Baarlamanka Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cusmaan Jawaari, oo isna ka warbixiyey dadaalka baarlamanka u galey xalinta dagaalka Gaalkacyo.